Guddoomiye Ku Xigeenka Labaad ee Baarlamaanka Dalka Oo Garoowe Gaaray – Radio Muqdisho
Wafdigani uu hogaaminayay guddoomiye ku xigeenka labaad ee Baarlamaanka Dalka Mahad Cabdalla Cawad ayaa maanta gaaray magaalada Garoowe, iyadoo si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Garoowe.
Soo dhaweyn kaddib ayaa guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya iyo wafdiga la socda ayaa waxaa madaxtooyada maamulka Puntland ku soo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan maamulkaasi oo uu ka mid ahaa madaxweynaha Puntland Dr C/weli Maxamed Cali Gaas, waxaana safarka ku wehlinayay Guddoomiye ku xigeenka Xildhibaanad Khadiijo Maxamed Diiriye.
Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Baarlamaanka Maamulka Puntland C/xamiid Sheekh C/salaan Ciise oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay in Garoowe ay ku soo dhaweeyaan Guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Dalka, wuxuuna sheegay in kulamo gooni gooni ay la qaadan doonaan wafdiga.
Guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Dalka mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa faah faahin ka bxiyay socdaalka Garoowe uu ku tagay, isagoo sheegay in howlo shaqo oo la xiriira wada tashiyo ku saleysan wada shaqeynta baarlamaanka Federaalka Soomaaliya iyo kan Puntland, wuxuuna sheegay in uu aad uu ugu faraxsanyahay sida loogu soo dhaweeyay halkaasi.
Madaxweynaha Jabuuti oo qaabilay wafdi ka socda Puntland “Sawirro”
Madaxweynaha Jabuuti oo qaabilay wafdi ka socda Puntland "Sawirro"